हिन्दू धर्मका अाश्चर्यजनक २९ वटा रहस्यहरू फुर्सद भए पढ्नुहोस - KlipMandu
१. अदितिबाट १२ आदित्यहरूकाे जन्म भयाे : विवस्वान्, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र र त्रिविक्रम (भगवान वामन)। यी सबै देवता कहलाए र यिनीहरूकाे स्थान हिमालयकाे उत्तरमा थियाे।
२. दितिबाट कयाैँ पुत्रहरूकाे जन्म भयाे : कश्यप ऋषिले दितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष नामक २ पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्रीलार्इ जन्म दिए। यी दैत्य कहलाए र यिनकाे स्थान हिमालयकाे ‍दक्षिणमा थियाे। श्रीमद्भागवत महापुराणका अनुसार यी ३ सन्तानका अलावा दितिका गर्भबाट कश्यपका ४० अन्य पुत्रहरूकाे पनि जन्म भयाे, जो मरुन्दण कहलाए। कश्यपका यी पुत्रहर नि:सन्तान भए तर हिरण्यकश्यपका ४ पुत्र थिए- अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रह्लाद र संहल्लाद।
← नायिका सुष्मा कार्कीको दावीः ५ मिनेटको ३ लाख ! कोही छ तिर्न सक्ने ?
मिस वर्ल्ड भैसकेकी प्रियंका अमेरिकामा पुलिसको फन्दामा …, भारतमा सनसनी ! →
ग्लोबल आईएमई बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
झापा- ३ को माटो र जनतालाई सम्झिएर सामनुपातिक छाडेर प्रत्यक्षमा उठेको : नेता सिटौला